खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ ? सावधान यी रोगहरु लाग्न सक्छन् | Makalukhabar.com
खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ ? सावधान यी रोगहरु लाग्न सक्छन्
– चिडचिडापन: एउटा यस्तो समस्या हो, जहाँ आफूलाई एकदमै थकाई लाग्ने, काम प्रति जागर नआउने र झर्को लाग्ने गर्दछ । बिहान खालीपेटमा चिया पिएमा फ्रेस होइन्छ भन्ने गलत धारणाको कारणले गर्दा यस्तो समस्या बढ्दै गइरहेको छ । विहान खाली पेटमा चियाले नभएर तातोपानी फ्रेस गराउने कारणले गर्दा तातो पानी पिउने बानी बसाल्नुपर्दछ ।
सरकारले कानुन निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेनः बाबुराम भट्टराई